Tinder Lite dia hanomboka afaka herinandro vitsivitsy ho an'ny Android | Androidsis
Toa tsy manam-piafarana ny hetahetan'ny fampiharana Lite. Mpanamboatra maro no mamoaka ireo karazana kinova amin'ny fampiharana azy ireo, izay kely kokoa ny habaka azo lanina amin'ny finday. Roa andro lasa izay dia Spotify Lite io ilay nambara tamin'ny fomba ofisialy. Anjaran'ny Tinder Lite izao, izay havoaka afaka herinandro vitsivitsy amin'ny Android.
Tinder Lite dia kinova maivana izay tsy mandany angona finday firy avy amin'ny fampiharana flirt malaza. Ny asan'ny fampiharana tany am-boalohany dia voatazona, fa miaraka amin'ny lanjany ambany amin'ny telefaona sy ny fanjifana ambany. Ny hevitra dia ny handefasana ity kinova fampiharana ity any amin'ny firenena vao misondrotra.
Hatreto dia voamarina izany Vietnam no firenena voalohany hanangana ny Tinder Lite. Mikasa ny handefa azy io amin'ny orinasa hafa any Azia ny orinasa. Voamarina ihany koa fa hahatratra ireo firenena any Amerika Latina ilay fangatahana. Na dia mbola tsy misy daty hanaovana io famotsorana io aza.
Toa tsy hanomboka any Eropa izy io, noho izany, na farafaharatsiny izao. Ny ankamaroan'ireo rindranasa ireo dia natao ho an'ny tsena misimisy. Amin'ireo firenena ireo matetika ny tahan'ny angon-drakitra dia lafo kokoa, noho izany izy ireo dia maneho fandaniana be ho an'ny mpanjifa ao aminy.
Ary koa, mpampiasa maro, raha ny tena izy, manana finday ambany izy ireo. Ka finday finday avo lenta no misy azy ireo. Ny fahaizana mampiasa Tinder Lite, izay kely kokoa ny habaka ilaina ary kely kokoa ny laniny, dia safidy tsara amin'ireo telefaona ireo. Ka takatra fa nalefa tany amin'ireny tsena ireny.
For now tsy misy daty manokana hanombohana avy amin'ny Tinder Lite amin'ireo tsena ireo. Ny fampiharana dia efa misy amin'ny fisoratana anarana teo aloha tao amin'ny Google Play, saingy tsy nisy daty nomena. Nilaza ny orinasa fa havoaka afaka herinandro vitsivitsy. Ka resaka miandry ela kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tinder Lite hanomboka tsy ho ela ho an'ny telefaona Android